Changzhou Daming Pharmaceutical Equipment Co., Ltd. nheyo muna 2000, ari nyanzvi mugadziri mubasa tsvakurudzo, kukura uye anogadzira zvinhu nokuomesa michina uye granulating muchini. Zviri parizvino ane zvebhizimisi yakawanda nemarudzi uye nokurondedzerwa muna China.Changzhou Daming Pharmaceutical Equipment Co., Ltd. nheyo muna 2000, ari nyanzvi mugadziri mubasa tsvakurudzo, kukura uye anogadzira zvinhu nokuomesa michina uye granulating muchini. Zviri parizvino ane zvebhizimisi yakawanda nemarudzi uye nokurondedzerwa mu China.
boka redu absorbs michina yemhando yepamusoro uye ruzivo kumba uye kunze, uye zvakasimba zvokurimisa ari ISO9001 dzakawanda unhu hurongwa mitemo kuitira chigadzirwa unhu. Kukura uye kutsvakurudza kuti kuomesa zvokushandisa, tinogara innovate nokuchinja kugadzira uye kugadzira dungwerungwe yepamusoro uye simba-rokuponesa zvigadzirwa. Maererano nezvinodiwa kumusika, isu taumba vanopfuura makumi mana akatevedzana nokuomesa, granulating, nokusanganisa uye de-dusting zvigadzirwa. The zvigadzirwa vari zvinowanzoshandiswa kuomesa uye dehumidification kuti maindasitiri mbishi zvinhu kana zvigadzirwa iri mishonga, zvemakemikari, zvokudya, chiedza bhizimisi uye mamwe maindasitiri, uye tinogamuchirwa zvakanaka kubudikidza vanoshandisa. Vatengi unobvumirwa kutora bvunzo uye kuongorora.
boka redu riri yakaisvonaka Chinese Jiangnan (kumaodzanyemba the yangtze River) guta uye akakurumbira guta maindasitiri Changzhou. Zvinonzi munzvimbo dzokumaruwa pamusoro Shanghai uye Nanjing Economic Development Zone, une okunze uye nyore kutakura. The kambani simba zvekushandisa simba, hwakakwana kuvhenekwa hurongwa, vepamusorosoro kubudiswa midziyo uye kunyatsoomerera Kwevadzidzi. We noushamwari vatengi zvitsva nezvitsaru, shamwari kubva mumamiriro ose oupenyu kumba uye kunze kushanyira uye kushanda pamwe chete kuti pave neramangwana riri nani!